Cade1 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ November 17, 2019 ] DEG DEG: Isimaddii Puntland oo kulan deg deg ah isku balansaday Garoowe & Deni oo lagu dhagan yahay.	Puntland
[ November 17, 2019 ] DAAWO VIDEO:Dekada Garacad Puntland oo Dhismaheeda Socdo,Mudug oo Dekada Ugu Weyn yeelanaysa	Faalloyinka
[ November 17, 2019 ] DAAWO VIDEO:Cali Xaraare oo Reer Maakhir Weeraray Suldaanka Guud Warsan Gali.	Maqal Iyo Muuqaal
[ November 17, 2019 ] DAAWO VIDEO Yaab:Wariye Abdihafid Mohamud oo Su’alo Kaga Yaabiyey Cabdiraxman cabdishakur Hadalkana Ku Dhejiyey	Faalloyinka
[ November 17, 2019 ] DAAWO VIDEO:Hogaamiyaha Oradamada Dr Jawaar Maxmed oo Sheegay Sirta Dalalka Soomaaliya Ka Degi Ladahay.	Faalloyinka
Articles by Cade1
November 16, 2019 Cade1 0
November 15, 2019 Cade1 0
Maxaa ka jira in Xukuumada Somaliland ay la heshiisay Jabhad dagaal ka dhan ah iclaamisay?
DAAWO MUUQAAL: Turkiga oo Muqdisho keenay Boqolaal Kumaan-doos ah, Maxayse qaban doonaan?
Ciidan cusub oo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya ayaa waxay gelinkii dambe ee Khamiistii soo gaareen Magaalada Muqdisho, ka dib markii ay tababaro ku soo qaateen Dalka Turkiga. Ciidankan oo dhalinyaro u badan ayaa waxaa loo […]
Madaxweyne Farmaajo oo galabta dalka dib ugu soo laabtay & Wasiir Cawad oo kashifay arrimo badan
Madaxaweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii kala qaybgalay Shirka Dadweynaha iyo Horumarinta ee Nairobi ayaa Jimcihii galabta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa Xarunta Wadanka Kenya waxaa […]
November 14, 2019 Cade1 0
DAAWO VIDEO: Guddoomiye Cirro: ‘‘Muuse Biixi Cabdi Somaliland xoog kumuusan qabsan, kumana sii haysan karo”!
November 13, 2019 Cade1 0
XASAASI + DAAWO VIDEO: Guddoomiye Cirro: ‘‘Muuse Biixi Cabdi Somaliland xoog kumuusan qabsan, kumana sii haysan karo‘‘!
XOG: Madaxweyne Farmaajo oo arrimo xasaasi ah kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya +(SAWIRRO)
November 13, 2019 Cade1 3
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Nayroobi kula kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa ku bogaadiyay dareenka waddaniyeed ee ay u qabaan dalkooda iyo doorka wanaagsan ee ay […]
UPDATE: Faah-faahin Khasaaraha dagaalkii maanta ka dhacay Boosaaso & Xaaladda oo Caawa… +(SAWIRRO)
November 13, 2019 Cade1 2
Waxaa faah-faahin dheeraad ah kasoo baxaya dagaal ka dhacay maanta Duleedka magaalada Boosaaso, Kadib markii Ciidamada maamulka Puntland iyo Ciidamo Beeleed kasoo Ruqaansaday deegaanka Carmo uu dagaal dhexmaray. Wararka ayaa sheegaya in Ciidamo Beeleedkii u […]
November 12, 2019 Cade1 0
DEG DEG + XOG: Madaxweyne Saciid Deni iyo Beeldaaje Maxamed Beeldaaje oo Caawa kulan Xasaasi ah wada qaadanaya!
November 11, 2019 Cade1 0
DEG DEG + DAAWO VIDEO: Siyaasi Salaad Cali Jeelle ‘‘Lafihiina u naxa ayaan leeyahay Sheekh Shariif iyo Xasan‘‘ & Jawaab kulul oo la siiyay Madasha Qaran.
November 10, 2019 Cade1 0
DHAGEYSO XASAASI: Puntland ‘‘Ciidanka wax saameyn ah kuma yeelan xil ka qaadistii Dhooba-Daareed” iyo Hanjabaad loo diray Somaliland!
November 9, 2019 Cade1 0
November 9, 2019 Cade1 1
November 9, 2019 Cade1 2
November 8, 2019 Cade1 0
November 6, 2019 Cade1 0
November 3, 2019 Cade1 0
Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqday inay heshiisyo la galeyso Shirkado Ajnabi ah oo aan DF Somaliya soo marin! + SABABTA
XASAASI + VIDEO: Xildhibaankii Su’aasha kululeed waydiiyay madaxweynaha Puntland oo wareysi xiiso leh bixiyay!
Xildhibaankii dhowaan su’aalaha kululaa waydiiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareysi cusub oo dhinacyo badan taabaya bixiyay.
DEG DEG:Ciidamadii ugu badnaa oo duleedka Garowe isku urursanaya, Axmed Karaash oo qorshe culus wada & Dagaal…